China DOSLY PS4 Controller Wireless Controller Iyahambelana PS-4 / Pro / Slim / PC, kunye Dual Vibration Game Remote-1000mAh factory kunye nabavelisi |Mcldosly
I-DOSLY PS4 isilawuli esingenazingcingo siyahambelana nePS-4/Pro/Slim/PC,enomdlalo wokungcangcazela kabini kude-1000mAh
【I-Platform ehambelanayo】 I-PS-4 isilawuli esingenazingcingo sihambelana ngokupheleleyo ne-PS-4/Pro/Slim/PC.
【Ushicilelo luka-2021】nomthamo webhetri ukuya kwi-650mAh, umgama olawulayo ukuya kuthi ga kwienyawo ezingama-32. Iimotor ezimbini zokungcangcazela, intonga yovuyo, isikrini sokuchukumisa, ukuva iqhosha, iaudio kunye nobuntununtunu zonke ziphuculwe, zihlala zibonelela ngolawulo oluchanekileyo kunye namava okudlala abalaseleyo.
【Amava amatsha】 Lo mlawuli uphuculweyo we-PS-4 uphendula ngokukhawuleza, phantse akukho lag kunye ne-drift. Yakhelwe kwi-speaker kunye ne-headset jack ye-stereo, ungaplaga kwi-headset ye-3.5mm ukonwabela umdlalo ngaphandle kokuphazamisa usapho lwakho kunye nabahlobo.
【Uyilo oluKhethekileyo】 Lo mlawuli we-PS-4 wamkela isitayile segraffiti eyenzelwe wena kwaye unokusetyenziswa njengesipho esifanelekileyo semihla yokuzalwa, iKrisimesi kunye noSuku lwaBantwana, ukwenza usapho lwakho, abahlobo okanye abantwana bonwabe yonke imihla!
【Umqulu uquka】PS-4 Controller x1,Micro USB Charge Cable x1
Okulandelayo: I-DOSLY Gamepad Controller ye-PS4, i-Wireless PS4 Controller iyahambelana ne-PS4 / Slim / Pro (Mnyama)
Isilawuli sePro esingenazingcingo seNintendo Switch/Swi...
PS4 Controller Game Controller for PS4 (Electri...